Nagu Saabsan - Bazhou City Dcl Furniture Co., Ltd.
1. Alaabada la Sameeyay: Horumar xoogan iyo koox cilmi baaris ayaa fikradahaaga ka dhigeysa mid dhab ah. Muunadna waa la bixin karaa.
2. Nidaamka xakamaynta tayada adag: tayada adag ee hawlgal kasta, hubinta sheyga, khadka wax soo saarka, xirmada iyo wax soo saarka laftiisa. Waxaan gaari karnaa BSCI iyo FSC shahaadada iyo UK Reach.
3. Soosaaridda wax soosaarka: noocyo kala duwan ayaa ku habboon dhammaan suuqyada kala duwan, qaababka Yurub iyo Aasiya.
4. Adeeg la isku hallayn karo ka dib iibka: Cudur daar ma leh laakiin xallin.
5. Shaqaalaha xirfadlayaasha ah: dhammaan shaqaalaheena xirfadda leh waxay leeyihiin khibrad hodan ku ah shaqadooda weyn.
DCL Furniture waxay alaabada u dhoofisaa wadamo badan oo ku yaal Yurub, Mareykanka, Bariga Dhexe, Koonfur-bari Aasiya iwm waxayna sameysay iskaashi muddo-dheer iyo waara oo ay la yeeshaan macaamiisha adduunka oo dhan.
Tayada ayaa ah dhaqankeena, waxaana ka walaacsanahay tayada, adeega iyo tartamada.
Warshaddeenna mihnad u leh miiska, fadhiga iyo soosaarka fadhiga oo ay ka mid yihiin
IN MAALADA CHAIR / BAR CHAIR / RIIQIDDA KHATARTA / CUDURKA CASIRADA
IN MAALINTA TABLE / COFFEE TABLE / DHAMMAAN TABLE / BASKET SIDE TABLE
OUN LIISKA CHAIR
ING SINGNAL SOFA / 2 SEATER SOFA / MULTI-SEATER SOFA
Buugga SHELF / FLOWER SHELF